Kodzero-dzevanhu, 08 Kurume 2019
Chishanu 8 Kurume 2019
Sangano Remagweta Harisi Kufara neMari Yechibatiso Irikuramba Ichikwidzwa
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mutongi wedare repamusoro VaDavison Foroma vapa mumiriri weHarare West mudare reparamende vari vebato reMDC, Muzvare Joanna Mamombe, mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Zimbabwe Yocherechedza Zuva reMadzimai
Zimbabwe nemusi weChishanu yakabatana nenyika dzepasi rose kucheredza zuva remadzimai kana kuti International Women’s Day, madzimai akawanda achiti ari kuramba achidzvinyirirwa nekushaiswa mikana.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvechidzimai zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti kushaikwa kwemukana wekucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women’s Day kunovatadzisa kuti vave nemazano angavabatsira kuti vangabuda sei mumukanwa mamupere.
Vatendi veAnglican Voratidzira kwaMutare Vachiti Bishop Wavo Ari Kuita zveHuori
Vatendi vekereke yeAnglican kwaMutare nemusi weChishanu vakaratidzira vachiti mukuru wavo Bishop Enock Ruona vasiye basa vachivapomera mhosva yekuita zvehuori pamwe nechipangamazano chavo vari gweta VaAshel Mutungura. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva iyi.
Murwiri weKodzero, VaItai Dzamara, Vosvitsa Makore Mana Vapambwa
Nekuda kwaizvozvo, sangano reEuropean Union riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ijekese kuti chii chaizvo chakaitika kwavari uye kuti patorwe matanho akakodzera.
Zuva reVanhukadzi Pasi Rose Rocheredzwa
Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose, reInternational Women’s Day.
Vanotengesa Mumigwagwa muHarare Vogara Vakaita hwaKiti naGonzo
Mapurisa ekanzuru yeHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, anonzi akusunga nekutora midziyo yevanorarama nekutengesera mumigwagwa, avo vanonzi vaitengesera pakati peguta.
Hurumende Inobvumidza Chikwata cheUN Kuzoferefeta Kutyorwa kweKodzero dzeVanhu
Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, reUnited Nations Human Rights Council, riri kutarisirwa kutumira nhume dzakakosha kuZimbabwe kuzoongoorora nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa nehurumende.
Kanzuru yeHarare Yogevera Vagari Mvura
Asi mukuru werimwe sangano revagari veguta reHarare, reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti kanzuru yavo haisi kugona kuchengetedza mvura sezvo mamiriyoni emarita emvura ari kurasika nekuda kwepombi dziri pasi pevhu dzakatsemuka dzisiri kugadziriswa